Soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha Macluumaadka Aluminium ee Warshadda Shiinaha ee Tooska ah Iibinta Dhismaha Aluminium | HUIYUAN
Xisaabiyaha Miisaanka Miisaanka ee Xaglaha Birta ah
Soo -saaraha, Alaab -qeybiyeyaasha Baararka Square ee ahama
Soo -saaraha, Bixiyeyaasha Baararka Wareegga ahama
Qaboojiyaha kulul ee duubnaa 301 309s 410s 9mm 2507 304 316 ...
Gariiradda-galvanized steel galvanized Sheet gariiradda
Qurxinta rinjiga Aluminium gariiradda
Macluumaadka Aluminium ee Golaha Jikada /albaabka /daaqadda M ...
Warshadda Tooska ah Iibinta Dhismaha Aluminium Pro ...
Warshadda Tooska ah Iibinta Dhismaha Aluminium
Daawaha aluminium 6061,6063
Xanaaq T5, T6
Daaweynta dusha Dhamaad Mill, Sandblasting, Anodizing, Electrophoresis, Nadiifinta, dahaarka korontada, dahaarka PVDF, Wareejinta qoryaha, iwm.
Shuruudaha lacag -bixinta 30% deebaaji, 70% dheelitir ka hor dhoofinta T/T; L/C ee aragga
Xaashida aluminium ee midab-dahabka leh waxay leedahay muuqaal qurux badan iyo iska-caabbinta daxalka oo raagaysa. Xooggeedu waa sahlan yahay in la rakibo, iyo iska caabbinta dabka iyo ilaalinta kuleylka aad bay u wanaagsan tahay. Intaa waxaa dheer, xaashida aluminium ee midab-dahabka leh waxay leedahay dib-u-warshadayn aad u wanaagsan sababta oo ah gaar ahaan maaddadeeda, oo la odhan karo waa dhaqaale aad u badan.
Dusha sare ee saxanka aluminiumka midabkiisu dahaarka yahay waa inuusan lahaanin indha-indheyn cad, dahaar ka maqan, ama waxyeellada waxyeellada ee dahaarka, iyo maroojisyada, xagashada, iyo finanku lama oggola. Kuwani dhammaantood waa sahlan yihiin in la arko. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad si taxaddar leh u fiiriso farqiga midabka ee xaashida aluminium ee midabka leh. Haddii aadan dheg jalaq u siinin, ma ahan wax sahlan in la arko, laakiin waxay saameyn doontaa saameynta qurxinta ee ugu dambeysa inta lagu jiro codsiga.
Saamaynta kulaylka ee hiitarka aluminiumka LED wuxuu xiriir toos ah la leeyahay nolosha adeegga nalalka LED.
Sida jiilka cusub ee ilaha adag ee dawlad-goboleed, diode-dhaliyaha iftiinka LED-ku waxay leeyihiin faa'iidooyin badan sida nolol dheer, hufnaan sare, keydinta tamarta, iyo ilaalinta deegaanka. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa goobaha bandhigyada iyo nalalka. Horumarinta sayniska iyo teknolojiyadda, teknolojiyadda horumarsan ayaa si joogto ah loo adeegsadaa Waxtarka iftiinka leh ayaa sii wanaajin doona, kharashkuna wuu sii dhacayaa.
In kasta oo nalalka LED-ku leeyihiin faa'iidooyin badan, nalalka LED-ka ee hadda jira ayaa kaliya u beddelaya 20-30% tamarta korontada tamarta iftiinka, iyo inta soo hartay 70-80% waxaa loo beddelaa tamar kuleyl, iyo tamarta kuleylka ee ay dhalisay LED-ka Nolosha iyo hufnaanta iftiinka leh saamayn weyn leh.
Waxaa guud ahaan la rumeysan yahay in heerkulka nalalka LED -ku uusan ka badnaan 80 darajo. 60-70 waa deegaan ku habboon in la isticmaalo, laakiin way adag tahay in lagu sameeyo jawi dhab ah. Aynu eegno adeegsiga nalalka waddooyinka ee u adeegsada ilaha iftiinka LED -ka codsiyada la taaban karo:
Imtixaan saddex bilood ah ayaa lagu qabtay magaalo gudaha ah, natiijaduna waxay soo baxday in hoos-u-dhigidda nalalka LED-ka ee la tijaabiyey intii la isticmaalayey ay ahaayeen: 8.77%, 15.5%, iyo 20.4%. Sababta ay u jirto hoos -u -dhac baaxad leh ayaa ah sababta oo ah heerkulka shaqada ee nalalka waddooyinkan ayaa kor u dhaafaya 80 digrii, taas oo macnaheedu yahay inay jirto dhibaato xagga kala -baxa kulaylka.
Hore: Qeexitaan sare oo rinjiga Aluminium rinjiyeeyay - Aluminium Extrusion Led Profile Aluminium for Led Strips Lights - HUIYUAN
Xiga: Albaabka iyo Daaqada Macluumaadka Aluminium
Dhismaha Profile Aluminium
Macluumaadka Aluminium ee Golaha Jikada /albaab /guul ...
Soo -saaraha Soo -saaridda Aluminiumka Warshadaha
Aluminium Extrusion wuxuu hogaamiyay Profile Aluminium ee Led ...
Albaabka iyo Daaqada Macluumaadka Aluminium
Midab la -habeeyay oo la daboolay gariiradda Aluminium
Dhismaha Profile Aluminium, Gariiradda Sheet Aluminum, Aluminum-Zinc Steel, Gariiradda bireed Aluminum, Dhuxul-Galvanized, Ppgi Ppgl,